🥇 ▷ Vivo V17 Pro: Sumcadda & # 039; s dhexe ee cusub waa rasmi ✅
Vivo V17 Pro: Sumcadda & # 039; s dhexe ee cusub waa rasmi
Vivo Wuxuu nagaga tagey taleefanno kugu filan isbuucii lasoo dhaafay. Kuwa ugu muhiimsan waxay ahaayeen NEX 3 iyo NEX 3 5G, oo si rasmi ah loo soo bandhigay toddobaadkan. Soosaarka Shiinaha ayaa haatan naga tagaya qalinkiisa cusub ee bartamaha, isagu Vivo V17 Pro, kaas oo si rasmi ah loo soo bandhigay iyo kaas oo aan hadda wax walba ku ognahay.
Isaga oo ah Vivo V17 Pro waa ninka ku guuleysta V15 Pro, marka si cad ayaan u arki karnaa horumarada ay shirkaddu ku soo bandhigtay qaabkan. Gaar ahaan meelaha ay ka midka yihiin kaamirooyinka ama batteriga waxaa ku jira kala duwanaansho caan ah oo qalabkan cusub. Waxan kaaga wada sheekeysaneynaa dhamaan aaladahaan hoose.
Naqshaddu waxay ku duubeysaa kamarad hore oo dib loo celin karo, mid ka mid ah fashions-ka weyn sanadkaan oo dhan. Tani waa wax u saamaxaya hore ee taleefanka inuu si buuxda uga faa’ideysto shaashadda. Dhanka dambe ee taleefanka waxaan ka helnay afar kamaradood kiiskan. Ku sharax sawirka.
Vivo Z1X: Noocyada qadka dhexe ee sumadda ayaa la cusbooneysiiyay
faahfaahinta Vivo V17 Pro
Taleefanka waxaa loo soo bandhigay sida a ikhtiyaarka ugu dhameystiran inta u dhaxaysa bartamaha. Waxay leedahay astaamo wanaagsan, oo ay ka go’an tahay soo saaraha Shiinaha ee ku wajahan sawir qaadista. Tan iyo Vivo V17 Pro wuxuu la imanayaa afar kaamirooyin gadaal ah, marka lagu daro kamarad hore u sii jiidanaysa, sidaa darteed naqshadeynta ayaa sidoo kale fure u ah. Isu dheellitirnaanta xagga faa’iidooyinka, waa ikhtiyaar fiican qaybtan. Kuwani waa tilmaanta taleefanka:
Bandhiga: 6.44-inji Super AMOLED oo leh HD buuxa + Xalka (2,400 x 1,080 pixels)
Kaydinta gudaha: 128 GB
Kaameerada hore: 32 + 8 MP
Baytariga: 4,100 mAh oo si dhakhso leh loo dallaco
Isku xirnaanta: 4G / LTE, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a / c, GPS, GLONASS, Dual SIM
Kuwa kale: Sawirka faraha
Cabirrada: 159 x 74.7 x 9.8 mm
Miisaan: 202 garaam
Nidaamka Howlgalka: Android Pie oo leh Funtouch OS 9.1
Shirkadda waxay si cad u dooratay inay horumariso kaamirooyinka taleefanka. Waxaan ka helnay wadar ahaan afar dareemayaal xagga dambe ee gadaashiisa, halka ugu weyn uu yahay 48 MP, wax aad maanta moodada u ah Android. Xaga dambe ee dareemahan waxaan filaynaa inuu yahay lens televhoto 13 MP ah oo leh f / 2.5 aperture ah, xagal ballaadhan oo ah 8 MP leh dabayl f / 2.2 ah iyo 2 MP ah oo leh laydh f / 2.4 ah. Dambe waxaa loogu talagalay akhriska ama cabirka qoto-dheer. Kaameradda hore waxaa loo isticmaalaa laba jibaar 32 + 8 MP ah kiiskan.
Haddii kale, waxaan arki karnaa in Vivo V17 Pro uu balan qaadayo wax qabad wanaagsan. Adeegso processor-yaqaan dhexdhexaad ah oo caan ah, sida Snapdragon 675. Waxay la imaaneysaa RAM u gaar ah iyo qaabeynta kaydinta, taasoo hubaal ah inay dad badani xiiseeyaan. Waxaan telefoonka ku haysannaa qalabka sawirka faraha, sida ay uga maqnaan karto tiradaan. Android Pie waxaa loo isticmaalaa nidaamka hawlgalka, kaas oo la yimaada Funtouch OS 9.1, oo si rasmi ah loo soo bandhigay toddobaadkan. Isticmaalayaasha ayaa horey u lahaan doona noocaan.
He Vivo V17 Pro sidoo kale wuxuu leeyahay batteriga weyn in kabadan tii ka horaysay, oo ah 4,100 mAh kiiskan. Awood wanaagsan, oo ku yabooheysa madax-bannaani wanaagsan taasna shaki la’aan waa mid kale oo ka mid ah awooddeeda. Waxa kale oo ay la timaadaa iyada oo la adeegsanayo kicinta degdegga ah.
Qiimaha iyo bilaabista
Xilligan, Taleefankan ayaa lagaga dhawaaqay India oo keliya. Inta badan, waxaa laga bilaabi doonaa suuqyada kale ee Aasiya, sida Shiinaha ama waddamada sida Malaysiya ama Vietnam. Laakiin marka laga hadlayo Yurub, waa hubaal in taleefankan aan la bilaabi doonin, maaddaama ay yar tahay sumadda sumcadda qaaradda. Faahfaahin lagama hayo taariikhda siideynteeda.
Isaga oo leh Vivo V17 Pro wuxuu ku bilaabi doonaa laba midab oo dukaamada, kuwaas oo kala ah Midnight Ocean iyo Ice Glacier, oo aan ku aragnay sawirrada. Waxay ku timaadaa qaabeyn u gaar ah, oo qiimaheeda aan la ogeyn xilligan. In kasta oo la filaayey in aaladda si dhaqso leh ugu imaan doonto Hindiya.